Tag Archive for "असफल" - ब्रेक्जीट सम्झौतामा असफल भएपछि प्रधानमन्त्रीद्वारा राजीनामा
ब्रेक्जीट सम्झौतामा असफल भएपछि प्रधानमन्त्रीद्वारा राजीनामा
काठमाडौं । बेलायतकी प्रधानमन्त्री थेरेसा मेले शुक्रबार सत्तारुढ कन्जरभेटिभ पार्टीको संसदीय दलको नेताबाट राजीनामा गरेका छिन् । प्रधानमन्त्री मेले जुन ७ मा कन्जरभेटिभ पार्टीको संसदीय दलको नेताको पदबाट राजीनामा दिने यसअघि नै बताएकी थिइन् । मेको ठाउँमा जुलाईको अन्त्यसम्ममा बेलायतमा अर्को प्रधानमन्त्रीको चयन हुनेछ र यस दौडमा ११ जना रहेका छन् । युरोपेली युनियनबाट बेलायत बाहिरिने (ब्रेक्जीट) का बारेमा ... थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । सरकार पूर्ण रुपमा असफल भएको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आरोप लगाएका छन्। कांग्रेस सहमहामन्त्री महतले सरकारको एक वर्ष पूरै असफल भएको दाबी गरे। उनले केपी ओली नेतृत्वको दुई तिहाई बहुमतको सरकारलाई कुरामा नम्बर वान’ तर ‘काममा भने जिरो’को संज्ञा पनि दिए। आज काठमाडौंमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै सहमहामन्त्री महतले सरकारले गलत आर्थिक नीति लिए... थप पढ्नुहोस्
संघियता असफल पार्ने गम्भिर षड्यन्त्र भयो !
काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले केही शक्तिहरु नेपालमा सङ्घीयता असफल पार्ने षड्यन्त्रमा लागेको बताएका छन । सम्वाद चौतारीले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उनले सङ्घीयता नरुचाउने केही शक्तिहरु केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच अधिकारको विवाद उठाएर सङ्घीयता असफल बनाउने दाउमा लागेको बताए । सङ्घीयता कागजमा व्यवस्था गरेपनि सोचमा स्थापित हुन नसकेको भन्दै उनले सङ्... थप पढ्नुहोस्
१० साउन, काठमाडौं । सिंगापुरमा जारी आईसीसी यू–१९ विश्वकप क्रिकेट छनोट अन्तर्गत एसिया क्षेत्रको छनोटको अन्तिम खेलमा नेपाल टेष्ट राष्ट्र अफगानिस्तानसँग पराजित भएको छ । सोमबार भएको खेलमा नेपाल अफगानिस्तानसँग ९६ रनले पराजित भएको हो । पाडाङस्थित सिंगापुर क्रिकेट मैदानमा अफगानिस्तानले दिएको १९६ रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपाल ४० ओभर ३ बलमा मात्र ९९ रनमा समेटियो । छनोटमा अफगानिस्तानसँग नेपालको यो दोस्रो हा... थप पढ्नुहोस्